चीन पीपी पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ पाउच निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Rijing Techtronic
घर > उत्पादनहरू > दिगो प्याकेजिङ > 100% पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ > पीपी पुन: प्रयोगयोग्य प्याकेजिङ पाउचहरू
पीपी पुन: प्रयोगयोग्य प्याकेजिङ पाउचहरू
RJ प्याक चीनको ग्वाङ्डोङ प्रान्तमा 100% रिसाइकल PP रिसाइकल गर्न मिल्ने प्याकेजिङ पाउचहरूको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो। हाम्रो डिजाइन विकल्पहरू पाउचहरूको विविध चयन समावेश गर्दछ जुन तपाइँको प्याकेजिङ आवश्यकताहरूसँग मेल खाने अनुकूलित गर्न सकिन्छ। अनुकूलनले उत्पादन ब्रान्डिङका लागि अनुकूलन मुद्रण जस्ता मूल्य थप्ने सेवाहरू पनि समावेश गर्दछ। कृपया आफ्नो ठूला बजारहरू जित्न अनुकूलित PP पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ्ग पाउचहरू बनाउनको लागि आफ्नो सोधपुछ पठाउनुहोस्।
PP रिसाइकल गर्न मिल्ने प्याकेजिङ्ग पाउचहरू पोलीप्रोपाइलिन (PP) बाट बनेका हुन्छन् जसलाई पुन: प्रशोधन गरी पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ। BOPP/CPP र OPP/OPP पाउचहरू मोनो-सामग्री संरचनाको कारण पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने छन्। पोलीप्रोपाइलीन (पीपी) मुद्रित फिल्मलाई बलियो र स्थायित्व प्रदान गर्ने पोलीप्रोपाइलीन (पीपी) को अर्को तहमा ल्यामिनेट गरिन्छ। पीपी पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ्ग पाउच समाधानले उत्कृष्ट कार्यात्मक उत्पादनहरू र परम्परागत प्याकेजिङ्ग झोला बजारको लागि विभेदित प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। दिगोपन र पुन: प्रयोगशीलता बढाउनुहोस्। उच्च उत्पादन दक्षता, कम धुंध, र उत्कृष्ट आर्द्रता प्रतिरोध।
हामी 100% पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने PP प्लास्टिकहरू प्रयोग गरेर खाना र गैर-खाद्य पीपी पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ पाउचहरू उत्पादन गर्छौं। हाम्रो डिजाइन विकल्पहरू पाउचहरूको विविध चयन समावेश गर्दछ जुन तपाइँको प्याकेजिङ आवश्यकताहरूसँग मेल खाने अनुकूलित गर्न सकिन्छ। अनुकूलनले उत्पादन ब्रान्डिङका लागि अनुकूलन मुद्रण जस्ता मूल्य थप्ने सेवाहरू पनि समावेश गर्दछ।
हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईलाई वन-स्टप-शप पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ्ग समाधानहरू प्रदान गर्नु हो ताकि तपाईले आफ्नो उत्पादनको निर्माण र प्याकिङमा ध्यान दिनु पर्छ।
पीपी पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ्ग पाउचहरू
3. पीपी पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ्ग पाउच सुविधा र आवेदन
मोनो सामग्री संरचनाको कारण PP पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ पाउचहरू 100% पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने छ
उच्च पारदर्शिता र अर्ध-कठोर
मुद्रित gravure 10 रंग सम्म
10Kg सम्मको आकारमा उपलब्ध छ
तातो सीलयोग्य बन्द
विभिन्न उद्योगहरूमा आवेदनहरू जस्तै पाल्तु खाना, कफी, बेकरी, मसालेदार, चामल आदि
आंशिक चमक फिनिश वा आंशिक म्याट फिनिशको साथ उपलब्ध छ
4.PP पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ पाउचहरू
5. PP पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ पाउच योग्यता
6. PP पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ पाउचहरू वितरण, ढुवानी र सेवा
म PP पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ्ग पाउचहरूको अर्डर मात्रा अनुसार 20 - 40 दिन लाग्नेछु
हामीसँग BRC, HACCP, SGS र ISO छ। र हामीसँग पीपी पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ्ग पाउचहरू र कम्पोस्टेबल पाउचहरूका लागि प्रमाणपत्रहरू छन्।
हट ट्याग: PP पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्याकेजिङ पाउचहरू, निर्माताहरू, आपूर्तिकर्ताहरू, कारखाना, स्टकमा, नि: शुल्क नमूना, ब्रान्ड, चीनमा निर्मित, चीन, मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण, CE, FDA, थोक, खरिद, अनुकूलित, बल्क, सस्तो, छुट, कम मूल्य , फेसन, सबैभन्दा नयाँ, गुणस्तर, उन्नत, नवीनतम बिक्री, फैंसी, वातावरणीय
PE पुन: पुन: पैकेजिंग पाउचहरू